Halkee ay joogi doontaa Xarunta Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Samsun? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir55 SamsunHalkee ay joogi doontaa Xarunta Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Samsun?
24 / 12 / 2019 55 Samsun, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Gobolka Banaadir, Headline, TURKEY
saldhigyada tareenka degdega ah ee samsun
Xarun tareen xawaare sare leh oo ku taal Samsun, halkaas oo ay ku caddaatay. Maalun-xawaare xawaare sare leh oo ay maalgelineyso Samsun-Corum-Kirikkale oo ku baahsan xaddiga meeshii lagu dhawaaqay xarunta Zamun.
Samsun waxay sugeysaa waqti dheer in laga sameeyo mashruuca tareenka xawaaraha-xawaaraha ku dheehan yahay ee la soo maray horumarro cusub. Mashruuca tareenka xawaare sare leh, kaasoo yareyn doona masaafada u dhexeysa Samsun iyo Ankara illaa iyo 2.5 saacadood, ayaa ka mid ah ballamihii ugu ballaarnaa ee ay dowladdu u ballanqaaday Samsun.
Duqa Degmadda Samsun ee Magaaladda Mustafa Demir, kulanka uu la yeeshay xubno ka tirsan saxaafadda ayaa warbixin ka siiyay Tareenka Xawaaraha Sare. Demir wuxuu sheegay in goobta Tareenka Xawaaraha Sare ee Samsun uu yahay mid hubaal ah. Sida ku xusan macluumaadka uu siiyay Mustafa Demir Tareenka Xawaaraha Sare ee degmada Samsun Canik waxaa lagu qaban doonaa gadaasha Xarunta ISGEM.
Wadooyinka tareenka ee xawaaraha sare ee Samsun, waxaa horey u jiray Çeltek, Paşapınarı, Mısmılağaç, Tuzla, Karageçmiş iyo Bekdeğin xaafadaha degmada Havza, Çukurbük, Kayabaşı, Doruk, Karadağ, Üçhanlar, Kuzulan, Degmooyinka Muratbeyli, Dura, Yukarıçirişli, Aşağıçirişli, Tatarmuslu, Tabaklı, Kurşunlu, Germiyan iyo Güneyce iyo degmada Canik ee Kaleboğazı, tuulada Demirci iyo saldhigyada xaafadaha Derebah wille ayaa ajandaha looga hadli doonaa. (Magaalada Samsun News))
Saldhigga Isticmaalka Soodhaweynta ee Sivas High waxay ku jiri doonaan labo goob oo ah saldhig tareen iyo jaamacad
Halkee ayuu mashruuca Rizenin Teleferik?
Muwaadiniinta ka soo jeeda Konya, Aaway qaboojiyeyaasha hawada in lagu rakibo taraam 2 bilood ka hor Nerede
'Halkee kuwa ka soo horjeeda buundada saddexaad'
safka ugu horreeya tareenka halkaas oo Made in Turkey
Halkee ayaa lagu qaban doonaa hindise-gareynta 3?
Xagee ayuu yahay harada? Garoomada waa la liqaa!
Xaggee baa nidaamka tareenka? Trabzon
Meelaha ay yihiin wasiirrada iyo ku-xigeennada Gebze?
Xarunta Tareenka Xawaaraha Sare ee Samsun
KPSS 2019-2 feejignaanta musharixiinta loo magacaabay Wasaaradda Gaadiidka
Düzce TSO Ankara Istanbul Xawaaraha Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare ayaa Held